Filaments loogu talagalay daabacayaasha 3D iyo resin | qalab bilaash ah
Toners iyo kartoonada khadku waa isticmaalka madbacadaha 2D, si kastaba ha ahaatee, waa 3D waxay u baahan tahay qalab kale kala duwan: qalabka wax soo saarka wax lagu daro. Inkastoo hagahan si gaar ah loogu talagalay fiilooyinka loogu talagalay daabacayaasha 3Dsidoo kale waa la daaweyn doonaa qalabka kale ee daabacaadda 3D, sida resins, biraha, isku-dhafka, iwm. Sidan waxaad awood u yeelan doontaa inaad wax badan ka ogaato noocyada qalabka aad ku haysato farahaaga, sifooyinka mid kasta, oo leh faa'iidooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda, iyo sidoo kale arag qaar ka mid ah talooyinka iibka.
Winkle Pla HD Filament |... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Smartfil PLA, 1.75mm,... Eeg astaamaha Eeg bixinta
PLA filament 1,75mm,... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Smartfil PP, 1.75mm, Run... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	Winkle Pla HD Filament |...
Tayada qiimaha	Smartfil PLA, 1.75mm,...
Waxaan jecel nahay	PLA filament 1,75mm,...
Smartfil PP, 1.75mm, Run...
1 Fiilada ugu fiican ee daabacayaasha 3D
1.1 GEEETECH PLA nooca filament
1.4 Itamsys Ultem Ololka Retardant
1.5 GIANTARM nooca PLA
1.6 MSNJ PLA (qoryo)
1.7 AMOLEN PLA (alwaax)
1.12 Xirmada FontierFila 4x agabyo badan
1.13 TSYDSW oo leh fiber carbon
1.14 FJJ-DAYIN Kaarboon Fiber
1.16 NEXBERG HANDLE
1.17 Galka Nadiifinta eSUN
2 Beeyada ugu fiican ee daabacayaasha 3D
2.3 Heerka SUNLU
2.4 ELEGOO LCD UV 405nm ABS-u eg
3 Qalabka daabacaadda 3D: waa maxay agabka ay isticmaalaan daabacayaasha 3D
3.1.2 Macnaha ABS, iyo ABS+
3.1.5 Naylon ama polyamide (PA)
3.1.8 PC ama polycarbonate
3.1.9 polymers waxqabadka sare (PEEK, PEKK)
3.2 Resins for photopolymerization
3.2.1 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka resinka
3.2.2 Sida loo doorto xabagta saxda ah
3.3 Qalabka kale
3.3.1 Buuxiyeyaasha (birta, alwaax,…)
3.3.3 walxaha isku-dhafka ah
3.3.5 Walxaha milmi kara (PVA, BVOH...)
3.3.6 cuntada iyo maadooyinka noole
Fiilada ugu fiican ee daabacayaasha 3D
Haddii aad rabto inaad wax ka iibsato Fiilada ugu fiican ee daabacayaasha 3d, halkan waxaa ah talooyinka qaar oo qiimo weyn u leh lacag:
GEEETECH PLA nooca filament
Qalabkan PLA-ga ah ee 3D-dabaceedka spool-ka daabacaadda ayaa lagu heli karaa 12 midab oo kala duwan oo laga dooran karo. Waa dhumucdiisuna waa 1.75 mm, la jaan qaadaya inta badan daabacayaasha FDA, iyo 1 kg oo miisaan ah. Intaa waxaa dheer, waxay ku siin doontaa dhamaystir aad u siman, oo leh saxnaanta sare ee ilaa dulqaadka 0.03 mm.
Waa mid kale oo ka mid ah noocyada ugu waaweyn ee fiilooyinka loogu talagalay daabacayaasha 3D. Kani sidoo kale ah nooca PLA, dhumucdiisuna tahay 1.75 mm, hal kiilo garaam oo gariir, iyo a xataa dulqaad ka sii wanaagsan marka loo eego kii hore, kaliya ± 0.02 mm. Dhanka midabada, waxaad haysataa iyaga oo laga heli karo 14 kala duwan (oo la isku daray).
Fiilada asalka ah ee 3D...
Waa gariir ee a heerkulbeeg heersare ah, sida PEI ama polyethermide. Qalab aad u fiican haddii aad raadinayso xoog, xasilloonida kulaylka, iyo awoodda aad u adkaysan karto is-nadiifinta uumiga. Sidoo kale waa 1.75mm waxayna leedahay dulqaad 0.05mm kor ama hoos, laakiin 500 garaam.
Itamsys Ultem Ololka Retardant
Duub kale oo fiilo ah oo loogu talagalay daabacaha 3D ee isla loam-kan oo miisaankiisu yahay nus kiilo. Sidoo kale waa PEI, laakiin leh Qurub macdan ah oo isku dhafan, taas oo ka dhigaysa ololka dabci heerkulbeegga codsiyada waxqabadka sare. Qalab xiiso u yeelan kara xitaa qaybta gaadiidka iyo hawada.
GIANTARM nooca PLA
Waa a xirmo 3 gariirood, mid kasta oo miisaankeedu yahay 0.5 kg. Sidoo kale dhumucdiisuna tahay 1.75 mm, tayo leh, oo leh dulqaad 0.03 mm, oo leh ilaa 330 mitir oo fiilo ah halkii spool, oo ku habboon daabacadaha 3D iyo qalimaan 3D. Farqiga weyn ayaa ah in lagu heli karo midabyo bir ah oo qaali ah: dahab, qalin iyo naxaas.
MSNJ PLA (qoryo)
Filka daabacaadda 3d...
Qalabkan kale ee PLA ee 1.75 mm ama 3mm (sida aad dooratid), oo leh 1.2 kg oo miisaan ah, iyo dhamaystirka dulqaadashada inta u dhaxaysa -0.03mm iyo +0.03 mm dusha ugu fiican, alaabtani waxay ku habboon tahay shaqooyinka farshaxanka. Taasina waa sababta oo ah waxaad leedahay midabyo u ekaan doona qoryo huruud ah, qoryo timireed iyo qoryo madow.
AMOLEN PLA (alwaax)
Fiilada 1.75 mm, ee PLA, oo leh tayo aad u wanaagsan, laakiin laga heli karo gudaha midabyo aad u qalaad, sida qoryo cas, alwaax walnut, alwaax ebony, iwm. Si kastaba ha ahaatee, ma aha oo kaliya inay ku daydaan midabadaas, laakiin polymer-ka waxaa ku jira 20% fiilooyinka qoryaha dhabta ah.
SUNLU TPU dabacsanaan leh...
Fiilooyinka daabacaha 3D ee walxaha TPU yacni walxo dabacsan (sida kiisaska taleefanka gacanta ee silikoon). Gariir kastaa waa 500 garaam, iyadoon loo eegin midabka laga doortay 7da la heli karo. Dabcan waa mid aan sun ahayn oo deegaan ahaan u wanaagsan.
Haddii aad rabto beddelka kor ku xusan, sidoo kale ka samaysan TPU dabacsan, laakiin midabyo badan oo cad, waxaad sidoo kale dooran kartaa gariiradan kale. Intaa waxaa dheer, shirkaddani waxay hagaajisay saxnaanta 0.01mm marka loo eego kii hore. Kubbad kasta waa 0.5 garaam oo tayadeedu aad u sarreyso.
Filka daabacaadda 3D nooca ABS+, of 1.75mm, oo saxan cabbirkiisu yahay 0.05mm, miisaankiisu yahay 1 Kg, waxaana lagu heli karaa laba midab, caddaan qabow iyo madow. Fiilo aad u adkaysa dildilaaca iyo qallafsanaanta, sidoo kale xidhashada iyo kulaylka, iyo xitaa ku habboon injineernimada.
Lagu heli karo cod madow, iyo laba dhexroor oo laga dooran karo, sida 1.75 mm iyo 1.85 mm. Kalluun kastaa waa 750 garaam, oo leh walxaha HIPS kaas oo leh astaamo la mid ah ABS, laakiin leh dagaal yar, marka lagu daro qirashada ciid iyo rinjiyeynta rinji akril ah. Waxa kale oo ay leedahay sifooyin farsamo oo aad u fiican, oo si aad ah looga dalbado qaybta warshadaha, waxaana loo isticmaali karaa taageero ahaan iyadoo si fudud loo kala diri karo D-limonene.
Calaamaddan ganacsiga, SmartFil, wuxuu ku takhasusay fiiloyinka horumarsan, oo leh hanti ka sarreeya kuwa caadiga ah.
Xirmada FontierFila 4x agabyo badan
Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa xidhmadan 4 filament ah oo loogu talagalay daabacayaasha 3D dhumucdiisuna tahay 1.75 mm iyo 250 garaam gariirkiiba, iyadoo wadar ahaan 1 kg ay u dhexeeyaan dhammaan. Waxa wanaagsan ayaa ah in aad haysato afar nooc oo agab ah oo aad ku bilaabayso oo aad tijaabinayso mid kasta sifadiisa: naylon cad, PETG hufan, Flex cas, iyo HIPS madow.
TSYDSW oo leh fiber carbon
Haddii aad raadinayso shay khafiif ah, horumarsan oo adkaysi u leh, fiilada daabacaaddani waa PLA, laakiin waxaa ku jira sidoo kale fiber carbon. Waxaa lagu heli karaa 18 midab oo laga kala dooranayo, 1kg isboorti oo dhexroorkiisu yahay 1.75mm.
FJJ-DAYIN Kaarboon Fiber
FJJ-DAYIN, 30% Fiber...
Madbacadaha 3D waxaa laga heli karaa 100 garaam, 500 garaam iyo 1 kg. Midab madow, dhumucdiisuna tahay 1.75 mm, oo leh walxo isku jira sida acrylonitrile butadiene styrene (ABS) iyo 30% fiber carbon sida xoojinta.
Gariir ku leh midab cad oo ABS ah iyo 0.75 kg oo miisaan ah. Bari Filku waa waxqabad sare, si loogu isticmaalo xirfadleyda sida injineernimada. Waa adkaysi cimilo iyo sidoo kale UV u adkaysta. Waxay leedahay iska caabin kulayl oo wanaagsan, waxayna leedahay FDA iyo RoHS shahaado.
Fillooyinkan daabacadaha 3D waxay ka yimaaddeen ASA, taas oo ah, laga bilaabo Acrylonitrile Styrene Acrylate, heerkulbeeg leh faa'iidooyin qaar ka mid ah ABS, sida caabbinta fallaadhaha UV iyo u janjeersiga hoose ee jaalaha. Intaa waxaa dheer, waxay yihiin spools 1 kg oo fiilo ah, 1.75mm dhexroor ah, oo la heli karo caddaan iyo madow.
Galka Nadiifinta eSUN
Nadiifinta Shayga eSUN...
Un nadiifinta fiilooyinka, sidan oo kale, waa nooc ka mid ah fiilooyinka loo isticmaali karo in lagu nadiifiyo sanbabada dibadda, ka hortagga xiritaanka, iyo sidoo kale ka saarida qashinka marka aad u bedelayso nooc ka mid ah walxaha kale, ama marka aad bedelayso midabka. Dhexroorku waa 1.75mm waxaana lagu iibiyaa 100 garaam.
Filamentiga eSUN Naylon...
1 kg dabaasha iyo dhumucdiisuna tahay 1.75 mm, oo leh midabyo dabiici ah oo cad iyo madow oo laga dooran karo. Filshankani waxa uu ka samaysan yahay naylon, sidaa awgeed waa fiber synthetic ah oo aan lahayn sun ama saamayn deegaanka. Gariirada qaarkood waxay isticmaalaan a 85% naylon iyo inta soo hartay PA6, oo ay la socoto 15% fiber carbon, kaas oo siiya xoog weyn, qallafsanaan, iyo adayg.
ELEGOO LCD UV 405nm... Eeg astaamaha Eeg bixinta
ELEGOO Biyo Lagu Dhaqan Karo... Eeg astaamaha Eeg bixinta
eSUN Resin TPU-sida UV... Eeg astaamaha Eeg bixinta
Ugu fiican	ELEGOO LCD UV 405nm...
Tayada qiimaha	ELEGOO Biyo Lagu Dhaqan Karo...
Waxaan jecel nahay	eSUN Resin TPU-sida UV...
Beeyada ugu fiican ee daabacayaasha 3D
Haddii ay dhacdo inaad raadineyso agabka loo isticmaalo daabacaada 3D xabagta, waxa kale oo aad haysataa doomahan lagu taliyay:
Sawir-polymer-ka-cawlan ee daabacayaasha 3D leh nalka LCD UV oo la socon kara inta badan daabacayaasha XNUMXD. nooca resin LCD iyo DLP. Waxaa lagu heli karaa 500 garaam iyo 1 kg, waxaana lagu heli karaa casaan, madow, cagaar, beige iyo translucent.
ANYCUBIC waa a ee noocyada ugu fiican daabacaadda 3D, oo uu leeyahay resin cajiib ah oo ku jira 0.5 ama 1 Kg gasacadaha, oo leh midabyo kala duwan oo laga dooran karo. La shaqeeya daabacayaasha intooda badan 3D LCD iyo nalka DLP. Intaa waxaa dheer, natiijadu waxay noqon doontaa mid aan caadi ahayn.
Una resin tayo leh oo la jaanqaadi kara inta badan daabacayaasha 3D ee xabagta. La jaanqaadi kara daabacayaasha LCD iyo DLP, 405nm UV, daawaynta degdega ah, miisaanka 1kg qasacad kasta, oo lagu heli karo midabyo sida caddaan, madow iyo casaan-beige.
ELEGOO LCD UV 405nm ABS-u eg
Sawir-polymer-ka kale ee caadiga ah ee astaanta caanka ah ee ELEGOO waxa kale oo laga heli karaa dhalooyinka 0.5 iyo 1 kg, oo leh midabyo kala duwan oo laga soo xusho. La jaanqaadi kara inta badan daabacayaasha DLP iyo LCD, oo leh dhammaystir la mid ah sifooyinka ABS, laakiin ku jira daabacayaasha 3D resin.
Waxaa lagu heli karaa cabbirada 0.5kg iyo 1kg, hal resin madow F80 laastikada, oo leh dherer sare iyo caabbinta jebinta, sidoo kale waa mid aad u adkaysi leh, taas oo furaysa tiro badan oo codsiyo suurtagal ah. La jaanqaadi kara MSLA, DLP iyo LCD.
Qalabka daabacaadda 3D: waa maxay agabka ay isticmaalaan daabacayaasha 3D
Qaybta talooyinka ee fiilooyinka iyo resins ee daabacayaasha 3D, waxaanu diirada saarnay agabka caadiga ah ee ay inta badan isticmaalaan shaqsiyaadka, iyo waliba qaar aad u horumarsan oo si xirfadaysan loogu isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira walxo kale oo badan oo loo isticmaali karo daabacayaasha 3D, waana inaad taqaanaa hantidooda.
Mid kasta oo ka mid ah agabyada waxaad arki doontaa sharraxaad kooban oo ku saabsan waxa ay tahay maaddadan, iyo liiska guryaha la mid ah tan:
Cadaadis jabin: waxa loola jeedaa culayska ay maayadu u adkeysan karto ka hor inta aanay si weyn u qalloocin.
Cilmanaan: waa iska caabbinta qallafsanaanta laastikada, taas oo ah, haddii ay leedahay qallafsanaan yar waxay noqonaysaa walxo laastiig ah, haddii ay leedahay qallafsanaan sarena ma noqon doonto mid aad u jilicsan. Tusaale ahaan, haddii aad u baahan tahay nuugista shoogga iyo dabacsanaanta, waa inaad raadisaa wax adag oo hooseeya sida PP ama TPU.
Cimri dherer: waxaa loola jeedaa tayada ama sida ay alaabtu u waarto.
heerkulka adeegga ugu badanMST waa heerkulka ugu sarreeya ee shay la hoos gelin karo iyada oo aan lumin waxqabadkiisa sida kuleylka kuleylka.
Isku-dhafka balaadhinta kulaylka (dilation): waxay cabbirtaa isbeddelka mugga ama dhererka shay ka jawaab celinta isbeddellada heerkulka. Haddii ay leedahay shahaado sare, uma shaqayn doonto codsiyada sida taliyayaasha ama qaybo ka mid ah waa in ay xajiyaan cabbirkooda heerkul kasta, ama way balaadhin doonaan oo noqon doonaan kuwo aan sax ahayn ama aan ku haboonayn.
Cufnaanta: qadarka miisaanka ee la xidhiidha mugga, halka cufan, waxay noqon kartaa mid adag oo joogto ah, laakiin sidoo kale waxay lumisaa iftiinka. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in alaabtu sabbayso, waa inaad raadisaa wax cufnaanta hoose leh.
Fududeynta daabacaadda: sida ay u fududahay ama u adag tahay in lagu daabaco walxo la sheegay.
heerkulka extrusionheerkulka loo baahan yahay in la dhalaaliyo oo la daabaco.
sariir kulul ayaa loo baahan yahay: Haddii aad u baahan tahay sariir kulul iyo haddii kale.
heerkulka sariirta: heerkulka sariirta ee ugu kulul.
Iska caabin UV: haddii ay ka hortagto shucaaca UV, sida soo-gaadhista qorraxda oo aan xumaan.
Biyo ma galeen: iska caabbinta biyaha, si ay u quusiyaan, ama u soo bandhigaan curiyeyaasha iwm.
Xalka: Walxaha qaar ayaa ku milma kuwa kale, taas oo noqon karta wax wanaagsan xaaladaha qaarkood.
Iska caabin kiimikaad: waa iska caabbinta dusha maadada si ay u xumaato oo ay keento xaaladaha deegaankeeda.
iska caabin daal: Marka walxaha la saaro culeys xilliyeedka ah, xoogga daalka ayaa tilmaamaya waxa maaddadu ay awood u leedahay inay u adkeyso iyada oo aan dhicin. Tusaale ahaan, qiyaas in aad abuurto gabal ay tahay in la foorarsado inta lagu jiro isticmaalka, sababtoo ah maaddada iska caabbinta hooseeya waxay ku dhici kartaa ama jabin kartaa 10 foorar, kuwa kale waxay u adkeysan karaan kumanaan iyo kumanaan iyaga ka mid ah ...
Codsiyada (tusaale isticmaalka): tusaale wax ku ool ah oo ku saabsan waxa loo isticmaali karo.
Way badan yihiin noocyada fiilooyinka ee daabacayaasha 3D ku salaysan polymers (iyo hybrids), qaar aan sun ahayn, deegaanka saaxiibtinimo, biodegradable (laga bilaabo qaar ka mid ah laga abuuray algae, kuwa ka hemp, istaarijka khudradda, saliidda khudradda, kafeega, iwm), dib loo warshadayn karo, oo aan lahayn dhamaadka aad u kala duwan. guryaha.
Waqtiga dooro, waa inaad ku xisaabtanto dhawr arrimood:
Nooca walxaha: Dhammaan madbacadaha 3D ma aqbalaan dhammaan agabka, waa muhiim inaad doorato midka ku habboon. Intaa waxaa dheer, waa in aad maskaxda ku haysaa sifooyinka (fiiri qaybo-hoosaadyo leh sifooyinka mid kasta) walxo kasta si aad u ogaato haddii ay la qabsanayso codsiga aad bixinayso.
Dhexroorka xuubka: kuwa ugu caansan, iyo kuwa ugu weyn, waa 1.75 mm, inkastoo ay jiraan dhumucyo kale.
Adeegso: kuwa bilawga ah waxa ugu fiican PLA ama PET-G, si xirfadaysan loogu isticmaalo PP, ABS, PA, iyo TPU. Waxa kale oo muhiim ah in la tixgeliyo haddii aad u isticmaali doonto arrimo caafimaad, weelasha ama maacuunta cuntada loo isticmaalo (aan sun ahayn), ama aad u noqonayso biodegradable, iwm.
Qaar ka mid ah kuwa ugu badan ee la isticmaalo:
PLA waa soo gaabinta polylactic acid ee Ingiriisiga (PolyLactic acid), waana mid ka mid ah qalabka ugu badan uguna jaban daabacaadda 3D. Taasi waa sababta oo ah waxay u fiican tahay codsiyo badan, way jaban tahay, wayna fududahay in lagu daabaco. polymer Tani ama bioplastic waxay leedahay sifooyin la mid ah polyetylen terephthalate, waxaana loo isticmaalaa codsiyo badan.
Cimri dherer: dhexe-hoose
heerkulka adeegga ugu badan: 52ºC
Isku-dhafka balaadhinta kulaylka (dilation)hoos
Fududeynta daabacaaddaCelceliska sare
heerkulka extrusion: 190 - 220ºC
sariir kulul ayaa loo baahan yahay: ikhtiyaari ah
heerkulka sariirta: 45-60ºC
Iska caabin UV: gaaban
Biyo ma galeen: gaaban
Iska caabin kiimikaad: gaaban
iska caabin daal: gaaban
Codsiyada (tusaale isticmaalka): Inta badan qaybaha iyo jaantusyada lagu daabaco 3D waxay ka samaysan yihiin PLA.
Macnaha ABS, iyo ABS+
El ABS waa nooc ka mid ah polymer, gaar ahaan acrylonitrile butadiene styrene caag ah.. Waa shay aad ugu adkaysan kara shooga oo loo isticmaalo qaybaha warshadaha iyo gudaha codsiyo badan. Heerkul-ku-sameedkan amorphous waxa kale oo uu leeyahay nooc la hagaajiyay, oo loo yaqaan ABS+.
Cadaadis jabin: badh
heerkulka adeegga ugu badan: 98ºC
Isku-dhafka balaadhinta kulaylka (dilation): sare, inkastoo ay si fiican u diidaan kulaylka
heerkulka extrusion: 220 - 250ºC
sariir kulul ayaa loo baahan yahay: Haa
heerkulka sariirta: 95 - 110ºC
Codsiyada (tusaale isticmaalka): Qaybaha LEGO, Tente, iyo ciyaaraha kale ee dhismaha ayaa lagu sameeyay alaabtan, iyo qaybo badan oo baabuur ah. Waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu sameeyo biibiile balaastikada ah, guryaha telefishinada, kombayutarada, iyo qalabka kale ee guriga.
El Walaxda HIPS, ama Saamaynta Sare ee Polystyrene (sidoo kale loo yaqaan PSAI) Waa mid kale oo ka mid ah qalabka aadka loo isticmaalo ee daabacadaha 3D. Waa nooc ka mid ah polystyrene, laakiin waa la hagaajiyay si aysan u jajabin heerkulka qolka, iyada oo lagu daro polybutadiene, taas oo sidoo kale hagaajinaysa iska caabbinta saameynta.
Cadaadis jabin: gaaban
Cilmanaan: aad u sarreeya
Cimri dhererCelceliska sare
heerkulka adeegga ugu badan: 100ºC
Fududeynta daabacaadda: badh
heerkulka extrusion: 230 - 245ºC
heerkulka sariirta: 100 - 115ºC
Codsiyada (tusaale isticmaalka): Waxa loo isticmaalaa in lagu sameeyo qaybaha baabuurta, alaabta lagu ciyaaro, mankiiladaha la tuuri karo, kombuyuutarrada PC iyo jiirarka, alaabta guriga, telefoonada, baakadaha caanaha, iwm.
El Polyethylene terephthalate, ama PET (Polyethylene Terephtalate) Waa nooc aad loo isticmaalo oo ah polymer caag ah oo ka yimid qoyska polyester-ka. Waxaa lagu helaa falcelinta polycondensation ee u dhexeeya terephthalic acid iyo ethylene glycol.
heerkulka adeegga ugu badan: 73ºC
heerkulka extrusion: 230 - 250ºC
heerkulka sariirta: 75 - 90ºC
Biyo ma galeenwanaagsan
Iska caabin kiimikaadwanaagsan
iska caabin daalwanaagsan
Codsiyada (tusaale isticmaalka): Waxaa si weyn loogu isticmaalaa weelasha cabitaanka, sida biyaha ama caagagga cabitaanka fudud, inkastoo weelasha aan PET-ka lahayn dhawaan la dalacsiiyay, maadaama ay tahay walxo xoogaa sun u ah caafimaadka. Qaar ka mid ah PET-da dib loo warshadeeyay ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sameeyo dharka faybarka polyesterka.
Naylon ama polyamide (PA)
El naylon, polyamide, ama naylon (Nylon waa calaamad ganacsi oo diiwaan gashan), waa nooc ka mid ah polymer synthetic oo ka tirsan kooxda polyamides. Waxaa la bilaabay in loo isticmaalo warshadaha dunta, sababtoo ah waa laastikada oo aad u adkeysi leh, marka lagu daro uma baahna foorno.
Cadaadis jabinCelceliska sare
Cilmanaandhexdhexaad ah, waa mid aad u dabacsan
Cimri dherer: aad u sarreeya, aad u adkaysa saamaynta iyo heerkulka
heerkulka adeegga ugu badan: 80 - 95ºC
Isku-dhafka balaadhinta kulaylka (dilation): dhexdhexaad-sare
heerkulka extrusion: 220 - 270ºC
heerkulka sariirta: 70 - 90ºC
iska caabin daalsare
Codsiyada (tusaale isticmaalka): marka lagu daro dharka, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sameeyo burush iyo shanlo, dunta ulaha kalluumeysiga, haamaha shidaalka, qaybo ka mid ah qalabka farsamada ee alaabta lagu ciyaaro, xargaha gitaarka, siibadaha, marawaxada, tolida qalliinka, jijimooyinka saacadaha, garabka, iwm. .
ASA waxay u taagan tahay Acrylonitrile Styrene Acrylate., thermoplastic amorphous ah oo la mid ah ABS, inkastoo ay tahay elastomer acrylic ah iyo ABS waa elastomer butadiene. Maaddadani waxay aad uga adkeysi badan tahay fallaadhaha UV marka loo eego ABS, sidaas darteed waxay u fiicnaan kartaa qaybaha qorraxda u soo bixi doona.
heerkulka adeegga ugu badan: 95ºC
heerkulka extrusion: 235 - 255ºC
heerkulka sariirta: 90 - 110ºC
Iska caabin UVsare
Codsiyada (tusaale isticmaalka)Qalab badan oo balaastik ah oo bannaanka lagu isticmaalo ayaa ka yimid ASA, sidoo kale qaabka muraayadaha qorraxda, balaastikada barkadaha dabaasha qaarkood, iwm.
Fillaha noocan oo kale ah waa heerkulbeeg caan ah oo daabacaadda 3D ah iyo wax soo saarka wax lagu daro. PETG waa polyester glycol, taas oo isku daraysa qaar ka mid ah faa'iidooyinka PLA sida fududaynta daabacaadda iyo caabbinta ABS. Waa mid ka mid ah caagagga loogu isticmaalka badan yahay adduunka, waxyaabo badan oo inagu xeeran ayaa lagu sameeyaa.
Biyo ma galeensare
Iska caabin kiimikaadsare
Codsiyada (tusaale isticmaalka): sidoo kale loo isticmaalo kiisas la mid ah kuwa PET, sida dhalooyinka caaga ah, muraayadaha, koobabka iyo taarikada, kiimikooyinka ama weelasha alaabta nadiifinta, iwm.
PC ama polycarbonate
El PC ama polycarbonate Waa thermoplastic aad u fudud in la qaabeeyo oo lagu shaqeeyo, si loo siiyo qaabka aad rabto. Aad ayaa loo isticmaalaa maanta, waxayna leedahay sifooyin aad u wanaagsan, sida caabbinta kulaylka, iyo iska caabbinta saamaynta.
heerkulka adeegga ugu badan: 121ºC
Isku-dhafka balaadhinta kulaylka (dilation): gaaban
heerkulka extrusion: 260 - 310ºC
heerkulka sariirta: 80 - 120ºC
Codsiyada (tusaale isticmaalka): dhalooyinka biyaha macdanta, durbaannada, daboolka dhismaha, beeraha (Greenhouse), alaabta carruurtu ku ciyaarto, agabka xafiisyada sida qalimaan, mastaradaha, CD-yada iyo DVD-yada, kiisyada alaabta elektarooniga ah, filtarrada, sanaadiiqda gaadiidka, gaashaanka rabshadaha, baabuurta, caaryada macmacaanka iwm.
polymers waxqabadka sare (PEEK, PEKK)
PEEK, ama polyether-ether-ketone, waa walxo nadiif ah oo aad u hooseeya oo ka kooban VOC-yada ama xeryahooda organic kacsan, iyo sidoo kale qiiqa gaaska hooseeya. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay sifooyin aad u wanaagsan, waana wax qabad heer sare ah oo semi-crystalline thermoplastic ah oo loogu talagalay isticmaalka xirfadleyda. Waxaa jira nooc qoyska ka mid ah oo loo yaqaan PEKK, kaas oo aad waxtar u leh, oo leh qaab dhismeed ka duwan, maadaama halkii 1 ketone iyo 2 ethers uu leeyahay 2 ketones iyo 1 ether.
heerkulka adeegga ugu badan: 260ºC
Fududeynta daabacaadda: gaaban
heerkulka extrusion: 470ºC
heerkulka sariirta: 120 - 150ºC
Iska caabin UVCelceliska sare
Codsiyada (tusaale isticmaalka): xadhkaha, qaybaha piston, bambooyin, valves, dahaarka fiilada giraangiraha, iyo dahaarka ee hababka korontada, iwm.
El polypropylene Waa polymer thermoplastic aad u caadi ah, iyo qayb crystalline ah. Waxaa laga helaa polymerization of propylene. Waxay leedahay kuleyl wanaagsan iyo sifooyin farsamo. Waxa lagu daraa elastomer-ka-thermoplastic ama TPE, sida Ninjaflex iyo wixii la mid ah.
Cilmanaan: hooseeya, waa mid aad u jilicsan oo jilicsan
Isku-dhafka balaadhinta kulaylka (dilation)sare
Fududeynta daabacaadda: dhexe-hoose
heerkulka sariirta: 85 - 100ºC
Codsiyada (tusaale isticmaalka): waxaa loo isticmaali karaa alaabta lagu ciyaaro, boombaleyaasha, dhalooyinka shidaalka iyo haamaha, microwave ama qaboojiyaha weelka cuntada u adkeysan kara, tubooyinka, xaashida, profiles, CD/DVD gacmo-gashi iyo kiis, tuubooyinka sheybaarka microcentrifuge, iwm.
El TPU ama polyurethane thermoplastic Waa nooc ka mid ah polyurethane. Waa nooc ka mid ah polymer-ka laastiga ah oo uma baahna vulcanization si loo farsameeyo, sida kuwa kale ee balaastikada ah. Waa shay cusub oo cadaalad ah, oo markii ugu horreysay la soo saaray 2008dii.
Cadaadis jabin: dhexdhexaad ah
Cilmanaan: hooseeya, dabacsanaan weyn iyo barti, iyo jilicsan
heerkulka adeegga ugu badan: 60 - 74ºC
heerkulka extrusion: 225 - 245ºC
sariir kulul ayaa loo baahan yahay: maya (ikhtiyaar)
heerkulka sariirta: 45 - 60ºC
Codsiyada (tusaale isticmaalka): daboolka silikoonka caanka ah ee telefoonada casriga ah ayaa inta badan laga sameeyaa maaddadan (ugu yaraan kuwa jilicsan). Waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu daboolo fiilooyinka dabacsan, tuubooyinka iyo tuubooyinka dabacsan, ee warshadaha dunta, sida dahaarka qaybo ka mid ah sida albaabbada albaabka baabuurta, kabaalka qalabka, iwm, kabaha kabaha, barkinta, iwm.
Resins for photopolymerization
daabacayaasha 3D in waxay isticmaalaan resin, halkii ay ka ahaan lahaayeen fiilooyinka, sida DLP, SLA, iwm, waxay u baahan yihiin dareere saafi ah si ay u abuuraan walxaha. Sidoo kale, sida fiilooyinka, waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo laga dooran karo. Waxaa ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan:
Heerka: waxay yihiin resins cad, sida midabyo cad iyo cawl, inkastoo ay sidoo kale jiraan hooska kale sida buluug, cagaar, casaan, oranji, brown, jaalle, iwm. Aad bay u fiican tahay in la abuuro prototypes ama qalabyada yaryar ee isticmaalka guriga, laakiin Uma fiicna abuurista alaabooyinka ugu dambeeya halka tayada sare looga baahan yahay ama adeegsi xirfadeed. Xaqiiqdu waxay tahay in ay leeyihiin dhamaystir wanaagsan marka la eego jilicsanaanta, waxay kuu oggolaanayaan inaad rinjiye. Waxay u fiicnaan karaan alaabta lagu ciyaaro ama sawirada farshaxanka.
mammoth: maaha kuwo aad u badan, in kasta oo dhamaadka sagxadahani aanay wada xumayn. Sida magaceeda ka muuqata, resins-yadan waxaa loogu talagalay in lagu daabaco qaybo runtii aad u weyn.
Hufan: Waxay aad ugu faafeen isticmaalka guriga iyo sidoo kale wax soo saarka warshadaha maadaama dadku ay jecel yihiin qaybo hufan. Resins-yadani waa kuwo u adkaysta biyaha, oo ku habboon walxaha yaryar, oo leh tayo aad u fiican, sagxadaha siman oo adag.
Adag: Noocyada noocaan ah ayaa aad caan u ah xirfadlayaasha, sida codsiyada injineernimada, maadaama ay leeyihiin sifooyin xiiso badan marka loo eego kuwa caadiga ah. Intaa waxaa dheer, sida magacooda ka muuqata, way adag yihiin ama ka sii xoog badan yihiin.
faahfaahsan sare: Way ka yara duwan tahay stereolithography-ga caadiga ah, maadaama lagu isticmaalo daabacadaha 3D ee horumarsan sida PolyJet. Waxay u shaqeysaa iyadoo lagu durayo jets aad u fiican oo lakabyo ah oo dul saaran masraxa la dhisayo oo u soo bandhigta UV si ay u adkeeyaan. Natiijadu waa dusha sare ee qumman, oo leh heerka ugu sarreeya ee faahfaahinta, xitaa haddii ay yihiin faahfaahin daqiiqad ah.
darajada caafimaadka: Xabagtan waxa loo isticmaalaa daawaynta, sida abuurista maqaar-galaha sida kuwa la shaqsiyeeyay ee ilkaha lagu rakibo, iwm.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka resinka
Sida for faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka xabagtaFillooyinka hortooda, waxaan ku haynaa:
Go'aamo ka wanaagsan
Habka daabacaadda degdega ah
Qaybo adag oo waara
wax ka adag
Uumiga ama taabashada iyaga waxay noqon kartaa khatar, maadaama qaar ay yihiin sun
Tirada moodooyinka la heli karo way ka yar tahay kuwa fiilada
Sida loo doorto xabagta saxda ah
Waqtiga dooro xabagta saxda ah Daabacahaaga 3D, waa inaad u fiirsataa cabbirrada soo socda:
Xoog xajin: sifadani waa muhiim haddii gabalku uu iska caabiyo xoogaga xajinta oo loo baahan yahay gabal waara.
DheerayntaHaddii loo baahdo, resinku waa inuu bixiyaa qaybo awood u leh inay iskala baxaan iyagoon jabin, inkastoo dabacsanaantu aanay ahayn tan ugu fiican.
Nuugista biyaha: Haddii gabalku u baahan yahay inuu iska caabbiyo biyaha, waa inaad u fiirsato sifooyinka uu xabagta aad heshay ku leedahay arrintan.
dhame tayada: resins-yadani waxay ogolaadaan in si siman loo dhammeeyo, laakiin dhammaantood maaha kuwo tayo isku mid ah, sida aan ku soo aragnay noocyada. Waxaad u baahan doontaa inaad ogaato haddii aad doorbidayso resin ka jaban, ama mid ka qaalisan oo tafatiran sare leh.
Cimri dherer: Waxaa muhiim ah in naqshaduhu ay yihiin kuwo adkaysi u leh oo soconaya waqti dheer, gaar ahaan haddii loo isticmaalo kiisaska, iyo noocyada kale ee la midka ah ee qaybaha.
Transparency: haddii aad u baahan tahay qaybo hufan, waa inaad ka fogaataa nooca mammoth-ka ama cawl/resinnada caadiga ah.
QarashkaResins-ku maaha kuwo raqiis ah, laakiin waxaa jira qiimo kala duwan oo lagu kala dooran karo, oo u dhexeeya qaar xoogaa jaban iyo kuwo kale oo horumarsan oo qaali ah. Waa inaad qiimeysaa inta aad rabto inaad kharash garayso oo dooro midka ku habboon miisaaniyadaada.
Dabcan, ilaa hadda waxaan eegaynay agabka inta badan lagu isticmaalo guriga, inkastoo qaar loo isticmaali karo xirfad ama warshado la faahfaahiyay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qalab kale oo gaar ah oo loogu talagalay codsiyo gaar ah iyo in ay isticmaali karaan oo keliya daabacadaha 3D ee ugu casrisan uguna qaalisan ee loo isticmaalo shirkadaha.
Buuxiyeyaasha (birta, alwaax,…)
Waxa kale oo jira alaab-buuxiyaha la isticmaalo, oo u badan alwaax iyo fiilooyinka birta ah. Caadi ahaan waa daabacadaha 3D ee isticmaalka warshadaha, oo leh habab aad u horumarsan, gaar ahaan kuwa biraha ah. Alaabtan sidoo kale ma fududa in la helo, maadaama ay ujeedadoodu tahay adeegsi xirfadeed.
ka isku-dhafka ama resins-ka kooban waa walxo synthetic oo si kala duwan u qasan si ay isu dhisaan. Tusaale ahaan, balaastikada lagu xoojiyay dhalada, ama fiilooyinka, iyo sidoo kale fiilooyinka dhalada laftooda, Kevlar, zylon, iwm. Sida codsiyadooda, waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro qaybo aad u fudud oo xooggan, iyo xitaa motorsport, duulista, qaybta hawada, jaakadaha rasaasta iyo isticmaalka kale ee militariga, iwm.
walxaha isku-dhafka ah
Noocyada noocaan ah ayaa isku dhafan Iskudhisyada organic iyo kuwa aan noolaha ahayn si loo hagaajiyo sifooyinka walxaha loo isticmaalo ka kooban, samaynta labadaba midba midka kale iyo is-dhexgalka. Waxay yeelan karaan codsiyo aad u kala duwan, sida optics, electronics, makaanik, bayoloji, iwm.
Waxaa jira daabacado 3D ah oo isticmaali kara ceramics, sida ay tahay kiiska aluminium (aluminium oxide), nitride aluminium, zirconite, nafaqo silicon, carbide silicon, iwm. Tusaale ahaan madbacadaha 3D-ga ah waa Cerabot, kaas oo sidoo kale leh qiimo jaban oo loogu talagalay isticmaalka guriga, oo ka mid ah noocyada kale ee warshadaha. Noocyada noocaan ah waxay leeyihiin kuleyl aad u wanaagsan, kiimiko iyo koronto (insulating), waana sababta loo isticmaalo warshadaha korontada, hawada hawada, iwm.
Walxaha milmi kara (PVA, BVOH...)
ka walxaha milmay, sida magacooda ka muuqata, waa kuwa (solutes) marka ay la xiriiraan dareere kale (millaha), sameeya xal. Wax-soo-saarka wax-soo-saarka qaar ayaa loo isticmaali karaa sida BVOH, PVA, iwm. BVOH (Butenediol Vinyl Alcohol Copolymer), sida Verbatim's, waa fiilo heerkulbeeg biyo-milmi leh oo loogu talagalay daabacayaasha FFF. PVA (alkolada polyvinyl) waa fiilo kale oo biyo-milmi leh oo si weyn loogu isticmaalo daabacaadda 3D. Tusaale ahaan, waxaa loo isticmaali karaa taageerooyinka qayb ka mid ah oo aad si fudud uga saari karto adiga oo ku milmaya biyaha.
cuntada iyo maadooyinka noole
Dabcan, waxaa sidoo kale jira daabacayaasha 3D oo awood u leh inay daabacaan walxaha la cuni karo, oo leh fiilooyinka khudradda, sonkorta, shukulaatada, borotiinnada, iyo noocyada kale ee nafaqooyinka. Qalabka biomaterials ee isticmaalka caafimaadka, sida unugyada ama xubnaha, ayaa sidoo kale la daabici karaa, inkastoo tani ay weli ku jirto marxaladda horumarinta. Sida cad, qaar badan oo ka mid ah maadooyinkan noole ma jiraan ganacsi ahaan, laakiin waxaa laga dhigay ad-hoc shaybaarka. Sidoo kale ma aha wax caadi ah in la helo cuntooyin, in kasta oo ay aad iyo aad ugu sii fidayaan qaybaha cuntada ee xirfadleyda ah.
Ugu dambeyntii, waxaa sidoo kale jira daabacayaasha 3D oo awood u leh inay daabacaan qalabka dhismaha sida sibidhka ama shubka. Noocyada noocaan ah waxay badanaa leeyihiin cabbir aad u ballaaran, oo awood u leh inay daabacaan dhismayaal waaweyn oo qaab dhismeedka, sida guryaha, iyo kuwo kale. Sida cad, noocyadan daabacadaha 3D looguma talagalin isticmaalka guriga midkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Daabacaadda 3D » Filaments daabacayaasha 3D iyo resin
M5Stack: wax kasta oo ay shirkadani kugu hayso IoT